प्रेम प्रस्ताव आए तर मैले असमर्थ जनाए - Kanchan Post
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २६, २०७३
प्रकाशित समय: २२:१२:४७
भोजपुर जिल्लाको यु गाविसमा जन्मथलो भएकी गायिका चन्द्रकला राईले सांङगीतिक क्षेत्रमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाएकी छन् । उनले भोजपुरको सानोदुम्मा र ठुलोदुम्मामा बोलिने मौलिक भाषा दुम्माली भाषामा आधारित “आन रिदुम पाङदुमचे मान्दिन मान्ने ” बोलको गीतबाट सांगीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन् । उनी अहिले निकै चर्चित अनि व्यस्त गायिका तथा संगितकारका रूपमा परिचित हुन पुगेकी छन् । उनले हालसालै मात्र दोस्रो गीति एल्बम “सोल्टी हजुर ” बजारमा ल्याएकी छिन् । उनै गायिका चन्द्रकला राईसँग खवरसंसार डटकमका लागि निमाराज तामाङले गरेको कुराकानीको अंश ………
तपाईंको दोस्रो गिती एल्बम ‘सोल्टी हजुर’ को बारेमा भनिदिनु होस् न?
मेरो पहिलो गीति एल्बम अन्तरा पश्चातको दोस्रो सोल्टी हजुर यसको बृहत् तयारीमा छु केही गीतको छायांकन सकियो जस्तैः शिर्ष गीत “सोल्टी हजुर” सार्वजनिक भए सँगै अन्य केही गीतहरुको क्रमबद्ध छायांकन हुने क्रममा छन्।यस एल्बममा मैले अाधुकिक,गजल,फ्युजन लोक,लोक जुहारीका साथै पप अाधुनिक सम्मका गीतहरु समाहित गरेकी छु एल्बमको कार्यहरुको क्रममा अादरणीय संगीत प्राज्ञ दा गणेश रसिक,पारस मुकारुङ दा,भीषण मुकारुङ,दिपक शर्मा देखि देवेश राई जस्ता संगीतज्ञ हरु सँग सहकार्य गरेकी छु चाडैं नै एल्बम सार्वजनिक गर्ने तरखरमा पनि छु ।
सोल्टी हजुरको शिर्ष गित ” सोल्टीनी ज्यु भन्दिउ कि आई लभ यु ” को भिडियो सार्वजनिक भएको कुरा बताउनु भयो । कस्तो रह्यो आम स्रोता दर्शकको प्रतिक्रिया ?
हेरिसक्नु हुने सबैले मन पराइदिनु नै भएको पाए केही सुधारात्मक प्रतिक्रिया पनि मेरा असल फ्यान अनि अग्रजहरु बाट पाएकी छु । साथै राम्रो प्रतिक्रियालाई सहर्ष ग्रहण गरेकी छु ।
सांगेतिक क्षेत्रमा उदाउँदो ताराका रुपमा हुनुहुन्छ । तपाईंलाई यो क्षेत्रमा लाग्न कसलै अभिप्रेरित गरेको हो वा आफै लाग्नु भयो ?
जब म संगीतलाई माया गर्थें बाल्यकाल देखि नै थाहा थिएन संगीतले माया गर्छ कि गर्दैन।काठमाडौं प्रवेश सँगै म्युजिक महा-विद्यालय पुगेकी मलाई मेरो गुरुले भन्नू हुन्थ्यो “तिमी संगीत क्षेत्रमा राम्रो फिट छौ भविष्य उज्वल छ” अनि संगीत प्रति धेरै मोह जागेर अायो सांगीतिक ज्ञान दिनुहुने मेरो गुरुको प्रेरणादायी अाशावादी शब्दहरु नै प्रेरणाका स्रोत हुन् ।
तपाईंले अहिलेसम्म कतिवटा गित गाईसक्नुभयो?
संख्यात्मक हिसाबले धेरै नै गाइसके लगभग ४ वर्षको अन्तरालमा ५ दर्जन जत्ति गाइसकेकी छु ।
तपाईंको पहिलो गित दुम्माली भाषामा रहेको थियो । यसको बारेमा पनि थोरै बताईदिनुहोस् न ?
दुङमाली भाषा संरक्षण समिति द्वारा दुङमाली भाषाको गीति एल्बम निर्माण कार्य भइरहँदा समिति पदाधिकारी केशर राई ज्यु ले निवेदन गर्नु भएको थियो अर्जुन दुङमालीको शब्द रचनामा रहेको गीत संगीतकार मनोज साङसोन द्वारा संगीतबद्द थियो काठमाडौ प्रवेश २ महिना नबित्दै यो अवसर पाएकी मैले संगीतकार भेट्न चापागाउँ पुग्नु पर्ने थियो कोलाहल शहर भित्र कयौं ठाउँहरुमा हराउदै अलपत्र पर्दै पुगेर गीत रेकर्ड गरेकी थिए हुनत दुङमाली भाषा अविज्ञ छु र थिए यत्ति थाहा थियो यो गीत त्यहाँको संस्कृति सँगै सम्बन्धित सांस्कृतिक गीत हो।
तपाईंलाई मनपर्ने आफ्नै गित कुन हो?
गाएको मध्ये “सुनकोसीको छेउ”संगीत गरेको मध्ये “प्रिय तिमी घाम बन्दा असाध्यै मन मन पराउछु जुन गीतहरु सुन्दा म अानन्द माथिको परम अानन्द भेट्ने गर्दछु।
प्रेममा पर्नु भएको छ ?
परेको छु । मलाई माया गर्नुहुने श्रोता दर्शकहरुको प्रेम बिना म एकपल पनि अधुरो हुनेछु ।
स्कुल पढ्दा धेरैले प्रेम प्रस्ताव गर्छ भन्छन । तपाईंलाई पनि प्रस्ताव आएका थियो होला?
होइन/कलेज पढ्दा त एउटैले गरेनन् किनकी म छुच्ची स्वभावको थिए केटाहरु नजिक हुँदा म तर्किएर हिड्ने गर्थें यसैले होला तर।पछिल्लो समय केहीले गरेका थिए तर मैले असमर्थ जनाए।अब भविष्यका योजनाहरु कस्तो रहेको छ ?
एक कुशल पत्रकार तथा रेडियोकर्मी पनि हुनुहुन्छ । रेडियोमा पनि समय दिनुहुन्छ र संगित , गायन साथै गित लेखन पनि गर्नुहुन्छ । रेडियोकर्मी भएर सांगेतिक क्षेत्रमा काम गर्दा फरक के पाउनु भयो?
यो त मेरो कर्म हो कर्म गर्न पाउनु मेरो अहोभाग्य हो म गीत गाउछु रेडियोमा लगेर मेरै प्रस्तुति श्रृगारछु यसको मतलब संगीत सँग कार्यक्रम, भुमिका पछिको संगीत, सुनमा सुगन्ध हुने गर्दछ। मेरो लागि म एक पात्र दुई पाटोमा बिभाजित छु तर दुइटै अपरिहार्य छ यी दुइमा मत भिन्नता छैन मेरो लागि किनभने मेरो उद्देश १)गायिका २)रेडियोकर्मी तर म दुवैमा लिप्त छु खुसि छु।
एक कुशल गायक तथा गायिका बन्नका लागि के के कुराको अावश्यकता पर्छ । तपाईंको यो चार वर्ष लामो सांगीतिक यात्राको अनुभवमा के चहि हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो ?
निरन्तरता,साधना,इमानदारिता, लगनशीलता र धैर्यता।
अबभविष्यका योजनाहरु कस्तो रहेको छ ?
सदा संगीतमा समर्पित हुनेछु कुशल गायिकाको हैसियतले सभ्य प्रस्तुतिहरु एवम् क्रमले पस्किदै जानेछु ठोस योजना भने तय गरिसकेको छैन हेरौं “सोल्टी हजुर”योजना बनाउन प्रेरित गर्ला कि नौलो कतै!
अन्तिममा तपाईंको दर्शक स्रोता तथा शुभचिन्तकहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
मेरो सार्वजनिक हुनै लागेको दोस्रो गीति एल्बम “सोल्टी हजुर” साथै मलाई सफल गायिका बन्न बनाउन यहाँहरुको अहम भुमिका रहिआएको छ साथ दिनु होला र यहाँहरु प्रति पनि मेरो विषेश खाल्को माया छ अटुट रहनेछ।सल्लाह सुझाव दिन चाहानु हुन्छ भने मलाई फेसवुकमा [email protected] सर्च गरेर ईन्बक्समा सन्देश छाड्न सक्नु हुनेछ धन्यवाद।